Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Dalarnas län / Vansbro
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 3 6 2020
Degmada Vansbro waa degmo sida jawharada u quruxbadan ee ku taalla gobolka Dalarna. Degmada waxa ay ka koobantaa afar magaalo iyo tuulooyin yaryar. Adeeg wanaagsan, raaxo leh wax kastana u dhawyihiin madama tuulada aad looga helo. Magaalooyinka waxa jira adeega bulshada sida dukaamo, boosto, iskaarsiin iyo iskoolaad.
1,657 kiilomitir oo laba jibaaran
Borlänge 91 kiilomitir
Falun 104 kiilomitir
Karlstad 158 kiilomitir
Örebro 175 kiilomitir
Vansbro waxad ka kiraysan kartaa guryo waxaadna ka kiraysankartaa ururka guryaga ee degmada Vansbro. Waxaad kale oo ka helaysaa shirkadaha guryaha laga kiraysto oo gaarka looleeyahay.
Degmada waxaad ka helaysaa dhawr luqadood: carabiga, soomaaliga, ingriiska, af tigreega, dari, taylandees iyo af ingriiska.
Waxaa ururada maxaliga ah sida dhaqanka, ciyaaraha iyo farshaxanka kuu dheer oo ku yaala SWIS – Haweenka Soomaaliyeed ee Iswiidhen.
Degmada waxaa jira adeeg bulsho sida dukaamo, farmishiye, meel lagu dabaasho, maktabad, xafiiska shaqada, dalyeelka shaqsiga iyo qoyska ee degmada, tiyaatar, maqaayad shaah, shaleemo. Erikshjälpen och Bumerangen waa labo dukaan o lagu iibiyo alaabta lasoo isticmaalay waxaana ka heli kartaa alaabta guryahay iyo dhar. Dukaanka Äppelbo Gemenskaps waxaad ka heli kartaa dhar iyo maacuun.
Waxaa jira dhawr fursadood ee xaga daryeelka carruurta, ka akhriso webdiska degmada.
Dugsida hoose dhexe ilaa iyo fasalkiisa 5 waxa ku yaalaan dhamaan dedmooyinka, fasalada 6-9 waxa laga helaa iskoolka Smedberg ee Vansbro. Waxbarashada dadka waaweyn iyo dugsiga sare waxaa laga helaa Vansbro, xarunka waxbarashada iyo barista ee Vansbro. Waxa kale oo kuyaala sfi, hab waxbarasho oo daruusta laguu soo dirayo adiga oo aanan fasal tagin iyo jaamacad.
Vansbro waxad ka heli karaa fursad waxbarashada dadka waaweyn, jihaynta bulshada ee dadka marka dhaw jimid, waxbarashada dadka waaweyn, sfi iyo waxbarashada gaarka ah.
Vansbro waxa ku yaala xarun cafaimaad, xarunta daryeelka carruurta, xarunta daryeelka haweenka, meesha dhalinyarada lagu qaabilo. Daryeelka ilkaha waxa oo ku yaala isla dhismaha ay carunta caafimaadka ku taal. Waxaa kale oo laga helayaa Vansbro daryeelka ilkaha oo gaar looleeyahay.
Marki loo baahdo turjubaan Vansbro waxa laga helaa xurunka turjubaanada ee degmada Borlänge.
Xiriirka gaadiidka dadwaynaha ee u kala socda Vansbro waa bas. Borlänge ayaa tariin laga laaci kara tusaale ahan la aadayo Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro, Gävle.
Degmada Vansbro waxaa ku yaala shirkado badan oo yar yar ee qaybo kale duwan, ganacsi, warshado kala duwan iyo sidoo kale war baahinta iyo farsamada gacanta tusaale ahaan. Hadii aad doonayso in aad bilaabto ganacsi gaar ah ama aad su'aalo qabto waxaad u tagi kartaa isbahaysiga wax soosaarka ee degmada.
Shaqo bixiyayaasha Vansbro waa tusaale ahaa degmada Vansbro, Orkla foods AB, Sveden Trä AB iyo lyko.se
Shaqooyinka ka banaan gudaha Vansbro